WARARKA BARAAWEPOST Jimce 21 oktober 2011
Dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada loo barakacay oo bilaabay maanta inay halkaas isaga qaxaan iyo xaaladda Dayniile oo deggan
Dadkii rayidka ahaa ee horey uga qaxay dagaaladii ku dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo ciidamadii isbahaysigii maxkamadaha islaamiga ah kuwaasoo tan iyo markaask u noolaa degaanka ceelsha biyaha ayaa sakaay bilaabay inay halkaas ka barakacaan oo ay dib ugu soo qaxaan magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah dadkii qaxayay saakay oo weriyeyaal ugu waramayay ex kontorool Afgooye ayaa sheegay inay laba sababod awgeed ay Muqdisho ugu soo noqdeen kuwaasoo kala ah Muqdisho oo nabad noqotay kadib markii xaafadihii ay horey uga barakaceen ay la ereegtay DFKMG isla markaana amnigooda uu sugan yahay, sababta labaadna ay tahay kadib markii dagaaladii ka dhacay Muqdisho ay u soo wareegeen dhanka degaankii looo barakacay ee ceelasha biyaha.
Sida ay wararku sheegayaan duqeymo culus oo ka dhacaysa qoryaha loo yaqaan BM ka ayaa si xooggan ugu dhacaysa goobaha ay dhufeysyada ugu jiraan maleeshiyooyinka Shabaab. Saraakiisha ciidamada AMISOM gaar ahaan afhayeenka AMISOM Paddy Akunda ayaa beeniyay sheegashada afhayeenka Shabaab uu shalay ku sheegay in askar AMISOM ah oo tiradoodu gaareyso 70 ay dagaalkaas ku dileen wuxuuna Akunda sheegay inaysan jirin tiro intaa le�g oo ciidan ah oo shalay looga dilay dagaalkii shalay.
Mar uu ka hadlayay sawiro lagu soo bandhigay qaar ka mid ah bogagga internetka soomaalida ayaa Paddy Akunda uu ku sheegeen inay yihiin been abuur iyo ka badbadin maaddaama haatan dagaalka looga xoog roonaaday Shabaab ayaa waxa keliya ee u harsan ee ay ku dagaal gakli karaan ay tahay dagaal dhanka saxaafadda ah ayuu yiri sarkaalkaasu.
Sidoo kale Taliyaha guutada saddexaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle sare Maxamed Rooble Jimcaale �Goobaanle� ayaa isna dhankiisa ka sheegay in ciidamada dowladdu ay joogaan goobihii ay shalay qabsadeen ee degmada Dayniile, waxa uuna beeniyay sheegashada ay shabaab sheegteen in ay dib u qabsadeen degmada Dayniile.
Kolonell Goobaanle ayaa intaa ku daray in xaaladda degmada Dayniile ay haatan deggan tahay isla markaasna aysan maanta dagaallo culus halkaas ka socon wuxuuna rajo fiican ka muujiyay in ciidamada DFKMG ay guud ahaan dalka ka xoreyn doonaan maleeshiyaadka Shabaab.
Kadib markii ciidamada qalabka sida ee DFKMG iyo kuwa AMISOM e eka socda dalka Brundi ay shalay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta degmada Deyniile isla markaana ay si buuxda uga xoreeyeen maleeshiyooyinkii Shabaab, ayaa maanta waxaa halkaasi ka dhacay dagaallo goos goos ah oo aan sidaa u xoogganayn
General Indhacadde oo hub iyo gaadiid dagaal ku wareejiyay madaxda DFKMG
Waxaa shalay galab ka dhacay garoonka kubbadda cagta ee magaalada Muqdisho �Muqdisho Stadium� munaasabad ballaaran tasoo ujeeddadii laga lahaa ay ahayd in lagu soo bandhigo hubkii iyo gaadiidkii dagaal ee uu General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhocadde ku wareejinayay dowladd FKMG ee Somalia waxaana munaasabaddaas ka qeyb galay masuuliyiin ka tirsan dowladda.
Munaasabaddaas uu Gen Yuusuf Indhocadde hubkiisa ku wareejinayay Dowladda Soomaaliya ayaa madaxdii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa Ra�iisul wasaaraha Xukuumadda Mudane Cabdiweli Maxamed Cali, ku xigeenka raiisal wasaaraha ahna Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen, .Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdisamaad Macalin Maxamuud, Wasiir u dowlaha Gaashaandhigga Maxamuud Maxamed Nuur , Taliyaha Ciidammada Xoogga Dalka General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed General Shariif Sheekhunaa Maye Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxmuud Axmed Nuur Tarzan iyo saraakiil ka tirsan Amisom.
Munaasabnadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay 9 Gaari oo ah gaadiidka dagaalka loogu talo galay, 250 askari oo iyagu hoos tagi jiray General Yuusuf Indhacade waxaana hadal uu halkaas ka jeediyey Janaraalku uu ku sheegay inuu si iskiis ah u go�aansaday arrintan islamarkaana uu Dowladda Soomaaliya ku wareejinayo Ciidammadan iyo gaadiidka dagaalkaba.
Taliyaha Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed General Cabdulqaadir Sh Cali Diini oo isna Munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa uga mahadceliyay Generaalka talaabada geesinimada ah ee uu muujiyay waxa uuna farta ku fiiqay in Generaalku uu sii wadi doono howshii uu horay ugu hayay Dowladda.
Sidoo kale Ra�isulwasaare Cabdiweli Maxamed Cali oo ka hadlay goobta ayaa hoosta ka xariiqay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah oo marxalad cusub u furaysa Soomaaliya isagoo dhanka kale tilmaamay in arintaan ay dad kale oo leh Ciidammo beeleed iyo kuwo gaar ah ka faaiideysan doonaan si loo dhiso Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaa gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ka hadlay Munaasabadda ayaa sheegay in magaalada muqdisho aysan u baahneyn inay waddooyinkeeda isticmaalaan gaadiid dagaal oo aysan laheyn dowladda Soomaaliya.
Major Gen fred Mugisha Taliyaha Ciidammada Amisom ayaa dhankiisa ugu baaqay maleeshiyaadka kooxda shabaab isagoo ka faa�ideeysanaya munaasabaadaasi inay joojiyaan falalka waalida ah oo ay ku leynayaan Shacabka Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan islamarkaana ay ku biiraan dadka kale ee Soomaaliyeed si ay dib ugu dhistaan dalkooda.